Hemhemi Kwete Yakarukwa Tote Bag Fekitori | China Hemhem Isina Kuruka Tote Bag Vagadziri, Vatengesi
Kupisa Zvitsva Zvigadzirwa China Sublimation Blank Isina-Yakarukwa Yekutenga Bhegi
Asina kurukwa mabhegi ari kuwedzera kuve anozivikanwa makore ano uye nharaunda inoshamwaridzika iyo inogadzirwa kubva ku100% inogadziriswazve uye inogadziriswazve zvinhu. Aya mabhegi akagadzirwa ne40-120 gramu isina-rakarukwa yakasimba yePolypropylene zvinhu izvo zvinoita kuti zvive nyore kutakura huremu.
Yakasarudzika logo Kudhinda PP Laminated Kutenga Kwete Yakarukwa Bhegi
Nonwoven bhegi ndechimwe chakakurumbira reusable kutenga mabhegi kutenderera pasirese. Mutengo wakachipa, unoshanda uye wakanaka kusimudzira mhando yako. Sarudzo dzakasiyana siyana dzemhando dzakasiyana, ruvara, s, uye maitiro.
Yakagadzirwa isina-rakarukwa machira (jira rakagadzirwa kubva polypropylene, Spun-bond) Isina rakarukwa jira rakagadzirwa kubva kumhandara pp zvinhu zvichiita kuti bhegi riwedzere kusimba. Kukora kwemachira asina kurukwa kunobva ku60gsm kusvika pa120gsm.
Yakasarudzika eco-inoshamwaridzika yakadhindwa chena pp isina rakarukwa tote bhegi
Bhegi risina kuwanda rakarukwa inzira yakanaka yekuti uratidze mhando yako kana sechipo chakanakira vadikani vako.
Kudhinda kunowanikwa kune ese mativi. Inoratidzira eco-inoshamwaridzika, iri nyore uye inoshanda hunhu.
Isina- dzakarukwa PP isingadhuri uye inopa yakasarudzika mhando.
tsika yekutenga bhegi isina rakarukwa bhegi yekutenga mutengo kushambadzira nekudhinda
Yakakura Reusable Bata Grocery Tote isiri yakarukwa yekutenga bhegi
Zvigadziriswazve Grocery Shopping Bag Supermarket Red Tote Bag Isina Kurukwa Bhegi
China Laminated Yakapetwa Beige Isina kurukwa Yekutenga Mabhegi Ine Logo
Yakadhindwa inogadziriswazve machira ehumambo bhuruu asiri yakarukwa yekutenga bhegi ine logo
Eco-inoshamwaridzika tsika yakasviba yakasviba isina kuruka tote bhegi
Eco-Inoshamwaridzika Yakachena Yakarukwa jira Nonwoven Takura Yekutenga Bhegi ine Logo
Kutengesa show yakatsvuka isiri-yakarukwa bhegi tote bhegi inogona kuvezwa pane yako logo
Yekusimudzira PP Reusable Eco-inoshamisika Kushambadzira Tote Tsvuku Isina Kuruka Yekutenga Bhegi